လေယာဉ်ခရီးစဉ်အတည်ပြုခြင်း - Myanmar Network
Posted by Soe Soe Win on November 28, 2013 at 16:21 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
လေယာဉ်နဲ့ ခရီးသွားတဲ့အခါ မိမိနိုင်ငံမှာဘဲ ခရီးသွားကုမ္ပဏီကို တယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးတော့ လက်မှတ်ဝယ်ရ ပါမယ်။ အဲဒီအပိုင်းကိုတော့ ကိုယ့်ဘာသာစကားနဲ့ ပြောနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ထည့်မရေးတော့ပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့နိုင်ငံဘက်ကို ရောက်လာပြီးချိန်မှ လေယာဉ်ခရီးစဉ်ပြောင်းဖို့ လိုအပ်လာပြီ ဆိုရင်တော့ အင်္ဂလိပ်လို ပြောဖို့ဆိုဖို့ လိုလာနိုင်ပါတယ်။ အခြားနိုင်ငံမှာလည်း မိမိဘာသာစကားကိုပြောတတ်တဲ့လူတွေ ရှိဖို့ များပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လိုလိုမယ်မယ် လေယာဉ်နဲ့ခရီးသွားတဲ့အခါ အသုံးပြုနိုင်မယ့် အထွေထွေ အကြောင်းအရာတွေကို အခု ဖော်ပြသွားပါမယ်။
အချို့လေကြောင်းလိုင်းတွေက လေယာဉ်ခရီးစဉ်ထွက်ခွာမယ့် နေ့စွဲမတိုင်ခင် ရက်အနည်းငယ်လောက် ကြိုတင်ပြီးတော့ အတည်ပြုချက်ယူဖို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ အဲဒီနေရာမှာ သူတို့က မေးလာနိုင်တဲ့ စကားတွေ၊ ပြန်ပြောဖို့လိုအပ်မယ့်စကားတွေကို အခုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
You: "I would like to confirm my flight."
Them: "Can I get your ticket number?"
You: "The number is 45-6-43."
(နံပါတ်ကတော့ ၄၅၆၄၃ ဖြစ်ပါတယ်။)
Them: "You are scheduled to depart on June 15th at 1:00 pm. Is this correct?"
(ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့ နေ့လည်တစ်နာရီ ထွက်မယ် ဟုတ်ပါသလား။)
You: "Yes it is."
Them: "Is anybody else traveling with you?"
You: "Yes, my wife."
Them: "Can I have the other ticket number?"
You: "It is 45-6-44."
Them: "Your tickets have been confirmed. Please arrive at the airport3hours before your flight departs. Thank you for calling." (လက်မှတ်ကို အတည်ပြုလိုက်ပါပြီ။ လေယာဉ်ခရီးစဉ်ထွက်ခွာမယ့် အချိန်မတိုင်ခင် ၃ နာရီ ကြိုတင်ပြီးတော့ လေဆိပ်ကို ရောက်စေချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။)
အခြား မေးလာနိုင်တဲ့မေးခွန်းအချို့ကတော့ လေဆိပ်ကောင်တာမှာကြားရတတ်တဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။
"Would you like to book your seats now?"
"Would you likeawindow seat or an aisle seat?"
( ပြတင်းပေါက်ဘက်ထိုင်ခုံလိုချင်ပါသလား။ ဒါမှမဟုတ်ရင် လျှောက်လမ်းဘက် ထိုင်ခုံလိုချင်ပါသလား။)
"What is your ticket number?"
(မိသားစုအမည် last name ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ။)
(ပထမအမည် first name ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ။)
လယောဉျနဲ့ ခရီးသှားတဲ့အခါ မိမိနိုငျငံမှာဘဲ ခရီးသှားကုမ်ပဏီကို တယျလီဖုနျးဆကျပွီးတော့ လကျမှတျဝယျရ ပါမယျ။ အဲဒီအပိုငျးကိုတော့ ကိုယျ့ဘာသာစကားနဲ့ ပွောနိုငျမှာဖွဈတဲ့အတှကျကွောငျ့ ထညျ့မရေးတော့ပါဘူး။ အင်ျဂလိပျစကားပွောတဲ့နိုငျငံဘကျကို ရောကျလာပွီးခြိနျမှ လယောဉျခရီးစဉျပွောငျးဖို့ လိုအပျလာပွီ ဆိုရငျတော့ အင်ျဂလိပျလို ပွောဖို့ဆိုဖို့ လိုလာနိုငျပါတယျ။ အခွားနိုငျငံမှာလညျး မိမိဘာသာစကားကိုပွောတတျတဲ့လူတှေ ရှိဖို့ မြားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ လိုလိုမယျမယျ လယောဉျနဲ့ခရီးသှားတဲ့အခါ အသုံးပွုနိုငျမယျ့ အထှထှေေ အကွောငျးအရာတှကေို အခု ဖျောပွသှားပါမယျ။
အခြို့လကွေောငျးလိုငျးတှကေ လယောဉျခရီးစဉျထှကျခှာမယျ့ နစှေဲ့မတိုငျခငျ ရကျအနညျးငယျလောကျ ကွိုတငျပွီးတော့ အတညျပွုခကျြယူဖို့ သတျမှတျပါတယျ။ အဲဒီနရောမှာ သူတို့က မေးလာနိုငျတဲ့ စကားတှေ၊ ပွနျပွောဖို့လိုအပျမယျ့စကားတှကေို အခုဖျောပွလိုကျပါတယျ။
(နံပါတျကတော့ ၄၅၆၄၃ ဖွဈပါတယျ။)
(ဇှနျလ ၁၅ ရကျနေ့ နလေ့ညျတဈနာရီ ထှကျမယျ ဟုတျပါသလား။)
Them: "Your tickets have been confirmed. Please arrive at the airport3hours before your flight departs. Thank you for calling." (လကျမှတျကို အတညျပွုလိုကျပါပွီ။ လယောဉျခရီးစဉျထှကျခှာမယျ့ အခြိနျမတိုငျခငျ ၃ နာရီ ကွိုတငျပွီးတော့ လဆေိပျကို ရောကျစခေငျြပါတယျ။ ကြေးဇူးတငျပါတယျ။)
အခွား မေးလာနိုငျတဲ့မေးခှနျးအခြို့ကတော့ လဆေိပျကောငျတာမှာကွားရတတျတဲ့ မေးခှနျးတှနေဲ့ ဆငျတူပါတယျ။
( ပွတငျးပေါကျဘကျထိုငျခုံလိုခငျြပါသလား။ ဒါမှမဟုတျရငျ လြှောကျလမျးဘကျ ထိုငျခုံလိုခငျြပါသလား။)
(မိသားစုအမညျ last name ဘယျလိုချေါပါသလဲ။)
(ပထမအမညျ first name ဘယျလိုချေါပါသလဲ။)
Permalink Reply by Aung Bo Hein on November 29, 2013 at 10:45
Permalink Reply by San Nay Htet on November 29, 2013 at 13:24
Can I have the other ticket number? မေးခွန်း မှာ have အစား ဘာသုံး လို ရ နိုင် မလဲ။
Permalink Reply by aungkyaw htoo on December 2, 2013 at 12:50
Permalink Reply by Su win myat on October 5, 2014 at 20:41
It is good for studying
Permalink Reply by Zaw Hteik on January 5, 2015 at 7:26